सम्झौताको प्रतिक्षामा भालुवाङ–भिमगिठे सडकखण्ड
सलिम अन्सारी, प्युठान भारत–नेपाल–चीन (तिब्बत) जोड्ने हालसम्मकै छोटो र सजिलो त्रिदेशीय सडक सञ्जाल निर्माणमा ढिलाइ भएकोमा प्युठानका स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । भारतको कोईलाबास हुँदै दाङको भालुवाङ,प्युठान बाग्दुला,बागलुङ भिमगिठे भएर
विद्युतीय तार जडानमा भएको भारतीय अवरोध कस्ले हल गर्ने ?
भीमदत्तनगर । विद्युतीय तार जडानमा अवरोध गरेको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद नेपाल–भारत संयुक्त सर्वे टोलीले टुंगो लगाउने सहमति भएको छ । जंगली जनावर गाउँ पस्न नदिनका लागि गत बिहीबार कञ्चनपुर
कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा के भयो निर्णय ?
सुुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को मस्यौदालाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका धेरै ठाउँमा आज पनि पानी पर्ने मौसमविद्ले अनुमान गरेका छन् । अस्ति बेलुकीदेखि सक्रिय भएको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावले देशका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको मौसमविद् समिर
युवालाई प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह
काठमाडौं, (नेस) राष्ट्रियसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले सडक र सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न युवाहरूलाई आ≈वान गर्नुभएको छ। शनिबार अजिरकोट काठमाडौं सम्पर्क समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले
कहाँ छ संसारकै सबैभन्दा ठुलो हिन्दु मन्दिर ?
काठमाडौं । संसारकै सबैभन्दा ठुलो हिन्दु मन्दिर जो कम्बोडियामा रहेको छ । कम्बोडियाको ठुलो क्षेत्र्मा फैलिएको यो मन्दिरको निर्माण सम्राट सुर्यवर्मन द्वितीयले आफ्नो शासनकालको इश्बी सम्बत १११२(५३मा यस मन्दिरको निर्माण
आलिया र रणवीरको यस्तो सम्बन्ध !
एजेन्सी । बलिउड यस्तो फिल्म इन्डष्ट्री हो जहाँ महिला र पुरुष सेलिब्रिटीहरुबीच सम्वन्ध जोडिन र तोडिन कत्ति बेर पनि लाग्दैन । कसको अफेयर कोसित चलिरहेको छ भन्ने ठहर गर्न पनि
बिहेपछि के गर्दैछिन् सोनम कपुर ?
एजेन्सी । बलिउडमा जब कुनै नायिकाले बिहे गर्न आँट्छिन् उनलाई सोधिने पहिलो प्रश्न हुन्छ, ‘बिहेपछि फिल्मलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न ?’ नायिका सोनम कपुर अर्को महिना आफ्ना प्रेमी आनन्द आहुजासँग
गर्भवती हुने प्रयास १४ पटकसम्म फेल भएपछि…
काठमाडौं । कमेडियन कृष्णा अभिषेक र बलिउड हिरोइन कश्मिरा शाहको जोडी जुम्ल्याहा छोराका अभिभावक भनेका छन् । यो जोडी २०१७ मा जुम्ल्याहा छोराको मातापिता बनेको हो । अब यो जोडी
सिस्नो पाउडर उत्पादन तालिमले बनायो उद्यमी
प्रताप बानियाँ, म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९, नेप्टेचौरकी गंगा खत्रीलाई अहिले अग्र्यानिक उत्पादन बिक्री गर्न भ्याई नभ्याई छ । २०५८ सालमा सिस्नोको पाउडर उत्पादनसम्बन्धी तालिम लिएपछि व्यावसायिक रुपमा लागेर उहाँ
केकीले रिङ रोडमा सित्तैमा यात्रुहरुलाई सित्तैमा घुमाउने
काठमाडौं । यहि बैशाख १४ गतेदेखी प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको चलचित्र ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ले राजधानीमा बिज्ञापनको लागि ४ दिन यात्रुहरुलाई बस सेवा गराउने भएको छ । चलचित्र प्रचार–प्रसार तथा बिज्ञापनको लागि
फिल्ममा जस्तै कलाकारको साँच्चै विवाह, किन टिक्दैन ?
काठमाडौं । अभिनेत्री गौरी मल्लको विवाह लामो समयसम्म टिक्न सकेन । प्रज्वल भण्डारीसँग वैवाहिक जीवन प्रारम्भ गरे पनि अभिनेत्री मल्ल उनीसँग लामो समयसम्म सँगै भइनन् । विवाहपछि उनीहरू अमेरिका पुगे
तपाईको जीवनमा आमुल परिवर्तन ल्याईदिने यस्ता छन बुद्धका वाणीहरु
काठमाडौं । संसारका मानव जातिका आदर्श पुरुष गौतम बुद्धका अरबौं अनुयायीहरु रहेका छन् । आज भन्दा झण्डै २६ सय वर्ष पहिले नेपालको कपिलबस्तु जिल्लाको तिलौराकोटमा जन्मिएका थिए गौतम बुद्ध ।
यी हुन् अन्तर्जातीय विवाह गर्ने नेपाली कलाकार
नेपालका कतिपय लोकप्रिय कलाकारले अन्तर्जातीय विवाह गरेका छन् भने कतिपय नायिकाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका छन् । अन्तर्जातीय र विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने धेरैजसो नायिकाले प्रेमविवाह गरेका हुन् । नेपालमा
विश्वकै होची नेपालकी कल्पना कविरथ
सुनसरी। नेपालमा पटकपटक होचा मानिसहरूका तर्फबाट विश्व कीर्तिमानी राखिएको कुरा चर्चा हुने गरेको छ। सुनसरीको प्रकाशपुरमा रहेको प्रकाशपुर डोबर इंग्लिस एकेडेमीमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत १७ वर्षीया किशोरी कल्पना कविरथ
ओलीले ‘केटाकेटी’ भनेर हेपेपछि प्रचण्डले चित्त दुखाए
काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माओवादीका नेता कार्यकर्तालाई ‘केटाकेटी’को संज्ञा दिएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चित्त दुखाएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले शनिबार बिहान आफू निकटका
यमलाल भुसाल, बुटवल । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले लुम्बिनीको बिकासका लागि बौद्ध सम्मेलन महत्वपुर्ण कडि हुने बताउनु भएको छ । लुम्बिनी बुद्ध जन्मस्थल मात्र नभई बौद्ध
दैनिक एक हजार कामदार मलेसियाको रोजगारीमा
काठमाडौँ । दैनिक करीब एक हजार कामदार वैदेशिक रोजगारका लागि जाने गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार विदेशमा रोजगारीका लागि २०७४ चैतसम्म पुरुष एक लाख ३४
असिनाले नुवाकोटमा लाखौंँको क्षति
नुवाकोट । हावाहुरीसँगै परेको असिनापानीले जिल्लामा लाखौंँको बाली नष्ट भएको छ । शिवपुरी र पञ्चकन्या गाउँपालिकामा विभिन्न स्थानमा परेको असिनापानीले खाद्यान्न बाली तथा तरकारी नष्ट गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले
गिरीको चित्रकला प्रदर्शनी शुरु
दाङ । दंगाली युवा चित्रकार लेखराज गिरीको एकल चित्रकला प्रदर्शनी शुक्रबारदेखि रिपोर्टर्स क्लब दाङमा शुरु भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ नवलपुर निवासी चित्रकार गिरीका ४६ तस्वीर ‘परिचय’ प्रदर्शनीमा राखिएको